MJS – “Kazan”: minisitra afrikana 20 mahery ho avy eto Madagasikara | NewsMada
MJS – “Kazan”: minisitra afrikana 20 mahery ho avy eto Madagasikara
Nosokafana, tamin’ny ofisialy, omaly teny amin’ny Asia & Africa Ivato, Ilay vela-kevitra lehibe tanterahin’ny minisitra afrikanina, hanatanterahana ny drafitrasa “Kazan I”. Nosafidina tao anatin’ny firenena maro i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny fifaninanana handray ity vela-kevitra ity ka 20 mahery ireo minisitra afrikanina ho avy eto an-toerana. Araka ny fandaharam-potoana, nisantarana ity andro manan-tantara amin’ny fanatanjahantena malagasy ity ny fampiofanana omen’ireo manampahaizana kameroney sy tonizianina, andiany voalohany “Kazan”, ary haharitra roa andro. Rahampitso alakamisy kosa, ho avy ireo minisitra 20 mahery hanatrika ilay vela-kevitra lehibe, tarihin’ny minisitra Tinoka Roberto. Ity farany izay nanambara fa zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fandraisana ity fivoriambe ity satria ahafahana manatsara ny fampianarana fanatanjahantena (EPQ), ao anatin’ny filaminana, ary koa ny fahasalamana.
Hahazo famatsiam-bola avy amin’ny firenena mikambana ny firenena malagasy rehefa ankatoavina mandritra io fivoriambe io ilay drafitrasa novolavolain’ny minisitra sady notohanan’ny filoham-pirenena Rajoelina Andry. Aorian’io fotoana io ihany koa ny hanaovana ny « Alliance des Sports de haut niveau » ary ny filoham-pirenena malagasy mihitsy no hanao izany. Araka izany, antsoina ireo mpanohana sy izay afaka manampy an’i Madagasikara amin’ity drafitrasa ity.
Isan’ny tanjona ihany koa, hoy hatrany ny minisitra, ny hanetsehana ireo 90 isanjato tsy manao fanatanjahantena.
Marihina fa tonga koa nitsidika ny minisitra, omaly, ny avy eo anivon’ny Jica sy ny PNUD, nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta. Tranobe 45 an’ny tanora ny anaovan’ny firenena japoney asa an-tsitrapo, sehatra samy hafa, araka ny fanazavana. Hahazoantsika tombony izany satria tafiditra anatin’ny fananganana fotodrafitrasa tena imasoan’ny fitondram-panjakana ankehitriny.